Ole Ndị Bụ Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova? | Ajụjụ Ndị Mmadụ Na-ajụkarị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova bụ mmadụ ole na ole na-elekọta ọrụ Ndịàmà Jehova na-arụ n’ụwa niile. Ha bụ Ndị Kraịst ma nke a na-akọ n’ọgbakọ Chineke. Ọrụ ha na-arụ dị ụzọ abụọ. Ha bụ:
Ịkwadebe ihe a na-ede n’akwụkwọ Ndịàmà Jehova ji amụ Baịbụl, na ịkwadebe ihe Ndịàmà Jehova na-amụ n’ọmụmụ ihe ha, ná mgbakọ ha, na n’ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche.​—Luk 12:42.
Ilekọta ọrụ ikwusa ozi ọma Ndịàmà Jehova na-arụ n’ụwa niile na ịhụ maka ihe ndị a na-eji ego onyinye eme.
Òtù Na-achị Isi na-eṅomi ihe nlereanya “ndịozi na ndị okenye nọ na Jeruselem” n’oge ochie. Ọ bụ ndịozi na ndị okenye ahụ mere mkpebi ndị dị mkpa maka ọgbakọ Ndị Kraịst e nwere n’oge ahụ. (Ọrụ Ndịozi 15:2) Ma, ha abụghị ndị isi ọgbakọ Ndị Kraịst. Otú ahụ ka ọ dịkwa Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova. Ihe ọ bụla ha na-eme na-esi na Baịbụl n’ihi na ha ma na ọ bụ Jizọs Kraịst ka Jehova họpụtara ka ọ bụrụ onyeisi ọgbakọ ndị Chineke.​—1 Ndị Kọrịnt 11:3; Ndị Efesọs 5:​23.
Olee aha ndị so n’Òtù Na-achị Isi?
Na Jenụwarị afọ 2018, ndị só na ya bụ Kenneth Cook, Jr., Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris III, Mark Sanderson, na David Splane. Ha nọ n’isi ụlọ ọrụ anyị dị na Wọwik, Niu Yọk dị n’Amerịka na-eje ozi.
Òtù Na-achị Isi nwere kọmitii isii na-elekọta akụkụ dị iche iche nke ọrụ Ndịàmà Jehova na-arụ. Onye nke ọ bụla só n’Òtù Na-achị Isi nwere otu komitii ma ọ bụ abụọ ọ nọ na ya.
Kọmitii Na-ahaziri Òtù Na-achị Isi Ọrụ: Ọ bụ kọmitii a na-eleba anya n’okwu ikpe Ndịàmà Jehova, na-ahazi maka ịgbatara ụmụnna anyị ndi ọdachi dakwasịrị ọsọ enyemaka, na ndị nke a na-emegide n’ihi ihe ha kweere. Ha na-ahụ maka ihe gbata gbata ọ bụla merenụ nke gbasara Ndịàmà Jehova.
Kọmitii Na-ahụ Maka Ndị Na-arụ Ọrụ na Betel: Ọ bụ kọmitii a na-ahụ maka Ndịàmà Jehova niile na-eje ozi na Betel.
Kọmitii Mbipụta: Ọ bụ kọmitii a na-ahụ maka ibipụta akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl, na-ahụkwa na e bugara ha n’ebe a chọrọ ha. Ọ bụkwa ha na-ahụ maka ịrụ ụlọ niile Ndịàmà Jehova na-arụ, ma Ụlọ Nzukọ Alaeze anyị, ma ọfis ndị nsụgharị, ma alaka ụlọ ọrụ anyị dị iche iche.
Kọmitii ije ozi: Ọ bụ kọmitii a na-elekọta ọrụ ikwusa ‘ozi ọma Alaeze Chineke’ anyị na-arụ.​—Matiu 24:14.
Kọmitii Izi Ihe: Ọ bụ kọmitii a na-ahụ maka ịkwadebe ihe ndị anyị na-amụ n’ọmụmụ ihe anyị, ná mgbakọ anyị, na n’ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche. Ọ bụkwa ha na-ahụ maka imepụta vidio na ihe ndị a na-egere egere e ji akụziri anyị ihe.
Kọmitii Ide Ihe: Ọ bụ kọmitii a na-ahụ maka ihe a na-ede n’akwụkwọ anyị dị iche iche, ma nke e biri ebi, ma ndị nke dị n’Ịntanet. Ọ bụkwa ha na-ahụ maka ihe niile Ndịàmà Jehova na-asụgharị.
E wezụga ọrụ a niile ndị só n’Òtù Na-achị Isi na-arụ na kọmitii ha dị iche iche, ha na-ezukọ kwa izu kwurịta mkpa ọgbakọ Ndịàmà Jehova. Ha zukọta, ha na-eleba anya n’ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru gbasara ihe ha chọrọ ịkwurịta, ma kwe ka mmụọ nsọ Chineke duzie ha. Ha na-agbalịkwa ikwekọrịta n’otu ihe.​—Ọrụ Ndịozi 15:25.
Ole ndị na-enyere Òtù Na-achị Isi aka?
Ndị na-enyere Òtù Na-achị Isi aka bụ ụmụnna ndị a tụkwasịrị obi. Ha na-enye aka na kọmitii Òtù Na-achị Isi dị iche iche. (1 Ndị Kọrịnt 4:2) Ha bụ ụmụnna ma nke a na-akọ n’ọrụ ha na-arụ na kọmitii ha nọ na ya. Ha na-esokwa kọmitii ha enwe nnọkọ kwa izu. Ha anaghị eso eme mkpebi, ma ha na-atụ aro ma ọ bụ kwuo ihe ga-enye aka ime mkpebi. Ha na-eme ihe kọmitii ha kpebiri, na-elerukwa anya ka ha mara ma ihe ndị ahụ e kpebiri hà na-abakwa uru. Òtù Na-achị Isi nwekwara ike iziga ha ka ha gaa leta ụmụnna anyị nọ n’ebe dị iche iche n’ụwa, ma ọ bụ nye ha okwu ha ga-ekwu ná nnọkọ ndị dị ka nnọkọ a na-enwe kwa afọ ma ọ bụ ememme ngụcha akwụkwọ Gilied.
AHA NDỊ NA-ENYERE ÒTÙ NA-ACHỊ ISI AKA
Kọmitii Na-ahaziri Òtù Na-achị Isi Ọrụ
Kọmitii Na-ahụ Maka Ndị Na-arụ Ọrụ na Betel
Kọmitii Ije Ozi
Kọmitii Izi Ihe
Kọmitii Ide Ihe
Gịnị Mere Chineke Ji Nwee Ndị Ọ Họọrọ Ka Ha Na-efe Ya?
Baịbụl kwuru ihe mere Chineke ji nwee ndị na-efe ya, kwuokwa otú e si hazie ha.
N’oge ndịozi Jizọs, ọ bụ “ndịozi na ndị okenye nọ na Jeruselem” bụ òtù na-achị isi. Ole ndị ka ha bụ taa?
Ndịàmà Jehova Hà Nwere Ndị Pastọ?
Ànyị nwere ndị pastọ? Ole ndị na-eje ozi n’ọgbakọ anyị?
Icheta Ịhụnanya Mbụ M Na-enyere M Aka Ịna-atachi Obi
Adara M Ogbenye ná Mmalite, ma Baa Ọgaranya n’Ikpeazụ